Ungayifumana njani yonke idatha yakho elahlekileyo kwi-iPhone kunye ne-iPad | Iindaba zeGajethi
Siphila ngokuntywiliselwa embindini wexesha ledijithali kwaye nangona inokunika umbono wokuba ibinzana elithile eligugileyo, inyani kukuba inefuthe elikhulu nelibalulekileyo. Uninzi lobomi bethu lukwizixhobo zethu eziphathwayo, ukusuka kwiifoto kunye neevidiyo ukuya kumaxwebhu kunye neenkcukacha zonxibelelwano, kodwa Kuthekani ukuba ngephanyazo siphulukane nayo yonke loo datha ngengozi?
Ngethamsanqa sele sinesixhobo esiluncedo kakhulu, esingasoze sifune ukusisebenzisa, esifana ne-inshurensi yasekhaya okanye yemoto, kodwa xa siyifuna, sonwabile ukuba nayo. Ndithetha ngoku EaseUS MobiSaver Simahla, un isoftware yokubuyisa idatha elahlekileyo yezixhobo ze-iOS Enkosi apho sinokuphila ngokukhululeka ngakumbi ukusukela ngoku.
1 Idatha yakho kunye neefayile zihlala zikhuselekile ngeMobiSaver
2 Izixhobo ezihambelanayo kunye nezixhobo
3 Yeyiphi idatha endinokuyifumana kwakhona?
4 Ndingayifumana nini idatha kwakhona?
5 Ukubuyisa njani idatha kunye neefayile kwi-iPhone yam okanye kwi-iPad
6 Kukwikhompyuter yakho
Idatha yakho kunye neefayile zihlala zikhuselekile ngeMobiSaver
Yonke imihla singabasebenzisi abangaphezulu kwe- Senza imisebenzi emininzi kwizixhobo zethu ze-iOS. Mna, umzekelo, ndenza uninzi lomsebenzi wam kwi-iPad, uninzi lwamaxwebhu am, iifoto zam, iividiyo zam, abafowunelwa bam, njl., Musa ukuya naphi na ngaphandle kwe-iPad okanye i-iPhone. Ezinye zazo ndizigcina apha ekhaya, ukufikelela kuzo ngaphandle koqhagamshelo lwe-intanethi, kunye ne-iOS 11 kunye neefayile "zeefayile" ezintsha, ndiyoyika ukuba oku kuya kuba yinto eqhelekileyo kunangoku.
Kananjalo uninzi lwethu lwenza iikopi ezikhuselayo kwi-iCloud, ngelixa abanye bekhetha ukuzenza kwi-iTunes, nangona kunjalo, phakathi kweekopi, sinokuthi sigcine abafowunelwa abatsha, sigcine amaxwebhu amatsha ... Yintoni enokwenzeka ukuba kwelo xesha lesithuba isixhobo sethu unengozi embi, okanye uhlaziyo lwenkqubo yokusebenza lusilele? Ngaba ngenene siyafuna ukuya kudano lokulahleka itoni yemiyalezo, amanqaku, abafowunelwa, iifoto, iividiyo kunye nokunye?
Izixhobo ezihambelanayo kunye nezixhobo
MobiSaver ukusuka kwi-EaseUS yinkqubo yesoftware efanelekileyo ukubuyisela idatha que Inenguqulo yazo zombini iiMac kunye neeWindows kwaye iyahambelana ngokupheleleyo neemodeli zamva nje ze-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod Touch, kunye nenkqubo yokusebenza ye-iOS 10. Ukongeza, ikwiilwimi ezininzi, ukuze singaxoki, kubandakanya iSpanish.
Kunye neMobiSaver siya kuba nakho ukubuyisa idatha:
Ukusuka kwisixhobo se-iOS, Ukuhambelana ne-iPhone 4s ukuya phambili, iPod Touch, zonke iimodeli zePad Mini, zonke iimodeli zePad Pro, kunye nazo zonke iPads ezivela kwiNew iPad okanye kwi-iPad 4.
Ukusuka kwii-backups ezigcinwe kwi-iTunes, ukusuka kwi-iPhone 3GS ukuya phambili, i-iPad kunye ne-iPod Touch.
Ukusuka kwizipele ezigcinwe kwi-iCloud, ukusuka kwi-iPhone 3GS ukuya phambili, i-iPad kunye ne-iPod Touch.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba nayo Kukho ingxelo yesi sixhobo ehambelana ne-Android.
Yeyiphi idatha endinokuyifumana kwakhona?
Con MobiSaver sinokuphinda sifike kwiindidi ezili-12 ezahlukeneyo zedatha:
Safari amanqaku encwadi.
Imbali yengxoxo yeWhatsApp (kubandakanya imiyalezo, umxholo wemultimedia kunye nabafowunelwa) kwii-backups ezigcinwe kwi-iTunes okanye kwi-iPhone.
Ukugcinwa ngokufihlakeleyo okupheleleyo okuvela kwi-iTunes.
Ndingayifumana nini idatha kwakhona?
Idatha kunye neefayile ezigcinwe kwisixhobo se-iOS zinokufunyanwa kwaye zibuyiselwe ngenxa:
La ukususwa ngengozi kubo okanye ukulahleka kwabo emva kohlaziyo olungaphumelelanga lwe-iOS.
Umonakalo kwisixhobo (ukuwa okunamandla, okuye kwamanzi ...) okoko nje iPC okanye iMac iyayiqonda xa ixhunyiwe.
Un Isitshixo sokugcina ukulibala iphasiwedi.
Ngaba ungene kwimowudi yokubuyisela, umzekelo, emva kokungaphumeleli kwintolongo.
Ukubuyisa njani idatha kunye neefayile kwi-iPhone yam okanye kwi-iPad
IMobiSaver inonxibelelwano olucocekileyo nolunobuchule lomsebenzisi, ke kulula kakhulu ukulandela inkqubo apho uya kufuna amanyathelo amathathu kuphela:
Qhagamshela isixhobo sakho se-iOS kwi-Mac yakho okanye kwiPC.
Qalisa ukuskena Kwisiphelo sendlela okanye kwii-backups ze-iTunes okanye iCloud kunye neMobiSaver ziya kufumana idatha elahlekileyo.
Phinda ufumane idatha kunye neefayile kwindawo yogcino olukwi-iTunes
Buyisa idatha kunye neefayile kwifowuni ye-iOS
Buyisa idatha yogcino iCloud
I-EaseUS MobiSaver iya kukubonisa idatha efunyenweyo kwaye kuya kufuneka uyenze khetha iifayile ofuna ukuzifumana kwakhona.
Jonga kwaye ukhethe iifayile ofuna ukuzifumana kwakhona
Kulula, ngokukhawuleza kwaye kukhuselekile MobiSaver. Kwakhona, ukuba uyafuna unakho yizame simahla.
Kwimeko apho kuya kufuneka uphinde ufumane iifayile ezisusiweyo kwiPC yakho, unokukhuphela isixhobo Idatha yokuBuyisa idatha.
Ndiyabulela koku kuluncedo, sinako gcina ezona fayile zibalulekileyo kwihard drive yakho kwimeko yokususwa ngengozi, ukwahlulahlula ifomathi, ukungaphumeleli okanye kwimeko yokuhlaselwa kwe-cyber yi -hlengware efana neWannaCry okanye eyona yamva nje, uPetya.
Ukuba unomdla, unokuzikhuphelela oku software alulame kwaye uzame ingxelo yasimahla ngaphambi kokwenza umtsi kwiilayisensi zobungcali.
Kucacile ukuba yonke imihla kuya kubaluleka ngakumbi ukuba nesixhobo esikwaziyo ukufumana iifayile zethu kwimeko yelahleko yengozi. Namhlanje idatha eninzi igcinwa ngaphandle kokugcina i-backups ezihlaziyiweyo njalo olu hlobo lwesoftware luba sisisombululo ekuphela kwaso kunokwenzeka ukuba sifuna ukugcina ulwazi esilugcinileyo kwi-hard drive.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyibuyisa njani yonke idatha yakho elahlekileyo kwi-iPhone kunye ne-iPad
IKhomishini yaseYurophu ihlawulisa uGoogle ngenani elirekhodiweyo lama-2420 ezigidi zeerandi